Education Hacking: The Free Software Movement na Mmụta Usoro | Site na Linux
Linux Post Wụnye | | Ndị ọzọ
Mmụta anataghị ikike
Mmụta ma ọ bụ usoro mmụta bụ usoro nke mmekọrịta mmadụ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya iji mee ka ihu ọma ha nwee ikike, ọgụgụ isi, nka ha., na ụdị mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba ya na omume okpukpe ya, tinyere ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nke ndụ mmadụ.
Na Free Software Movement nwere ma ọ bụ nwere ike inwe nnukwu ọrụ na Mmụta na na mgbanwe nke usoro mmụta mmụta ugbu a ma ọ bụrụ na ndị Society na-akwalite ọnọdụ ma na-akwado ndị States / Gọọmenti nwere mmasị karịa ndị nweere onwe ha, imeghe, ndị na-ekwenye ekwenye na ndị nwere ọrụ.
2 Ugbu a PANORAMA
Ngosipụta mberede nke teknụzụ Ozi na Teknụzụ Nkwukọrịta, ọkachasị nke akpọrọ "Ntaneti" na nke akpọrọ "Internet nke ihe" ugbu a, na-emetụta usoro agụmakwụkwọ n'afọ iri ndị gara aga., ma ọ bụ mmụta na ọbụna mmụta onwe onye, ​​nke ndị mejupụtara ọha mmadụ nke oge a, n'ụzọ sara mbara mana nwere mmetụta dị egwu, dị irè na nke ọhụụ, dịka oge ole na ole gara aga na akụkọ ntolite.
Dịka o mere na ọdịdị nke Press, na ikekwe Redio ma ọ bụ TV, na-enye ụmụ amaala, mmegharị nke ụmụ amaala chọrọ, ihu ọma ma ọ bụ gbanwee onwe ha, usoro nke ụdị ugbu a. maka ihe omuma ohuru na nke ohuru nke ihe omuma, omumu, omumu, ihe okike na ndi ozo n’okpuru ihe omuma nke echiche nke “Nwepu, Mepee ma Nweta”.
Ugbu a PANORAMA
Taa ọ bụghị naanị agụmakwụkwọ ma ọ bụ usoro mmụta emetụtala nke ukwuu site na ịrị elu nke teknụzụ ọhụụ, kamakwa akụ na ụba na-arụpụta ihe na akụnụba, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọbụlagodi okpukpe (n'agbanyeghị na ọ dị ala), ma na okwu a kapịrị ọnụ nke metụtara anyị, ya bụ, agụmakwụkwọ, na akụkụ ya atọ (mmepụta, oriri na nkesa), mmetụta ahụ arụgoro ọrụ dị mkpa na evolushọn na ụdị mmadụ na nke onwe ya, emikpu na arụmọrụ ka ukwuu na irè, maka abamuru nke ndị na-eme ihe nkiri metụtara.
Ya mere, mgbanwe nke teknụzụ dị ugbu a na-ebute mgbanwe mmụta mmụta ugbu a, n'ime ọha mmadụ na-agbanwe agbanwe, nke na-achọ ilekwasị anya na mmepụta na ọzụzụ nke ndị mmadụ n'otu n'otu (ụmụ amaala) site na mgbanwe teknụzụ na nke mmekọrịta ọha na eze nke na-eweta ọha mmadụ ọhụrụ, Otu Ọmụma Ihe Ọmụma, mana ọ bụghị lekwasịrị anya na asọmpi ma ọ bụ uru, kama na ịkekọrịta na mmepe ọnụ maka abamuru nke mmadụ niile.
Kwupụta na-ewu nke ọhụrụ a izi, ekere òkè, emeghe, free na oke nlereanya bụ ebe anyị kwesịrị e kere eke nke a ọhụrụ echiche nke University, Mahadum 3.0, nke dị n'okpuru osisi nke State / Nation / Gọọmenti mana n'aka otu ụmụ amaala ma ọ bụ mmegharị nke ụmụ amaala, ndị nwegoro ụzọ a rụrụ maka nnwere onwe, ihe emeghe, na ịnweta.
Dị ka Free Software Movement, nke n'aka nke ọzọ ma ọ bụ na-agbakọta yana mmegharị dịka ngwanrọ efu, Cryptocurrencies, na ndị na-ede blọgụ (Ndị edemede / ndị ode akwụkwọ) nke ọdịnaya na Mmụta, Sayensị na Teknụzụ n’ozuzu, mezuru.
Kedu ka a ga - esi nyiwe Mahadum 3.0 a nke na - ewere agụmakwụkwọ na ọkwa ọhụrụ, yana ọhụụ ọhụụ, tozuru oke ụmụ anyị na ndị nọ n’afọ iri na ụma anyị, ndị ọkachamara ga - eme n’ọdịnihu dị nnukwu mkpa na obodo ọ bụla na - emepe emepe, ndị bụgogo ngwaahịa pụta nke ọha mmadụ maara ihe ugbu a?
Iji hụ na ụmụ anyị, ụmụaka ndị a nke oge ọhụụ dijitalụ a, ndị nwere usoro mmụta ugbu a nke usoro ugbu a na-agwụ ike ma daa, ọtụtụ oge ịkwụsị ịmụ akwụkwọ maka enweghị nkwado ma ọ bụ ntụzi ma ọ bụ ịzụ onwe ha na-enweghị asambodo kwesịrị ekwesị ma ọ bụ nzere ntozu gọọmentị, gaa n'ihu na ụzọ nke akwụkwọ akwụkwọ n'okpuru atụmatụ ọhụrụ mara mma.
Ọtụtụ ụmụ amaala ugbu a, ndị ọkachamara ma ọ bụ na ọ bụghị, na-ahụ agụmakwụkwọ ugbu a ma ọ bụ usoro agụmakwụkwọ ugbu a, ka ọ bụrụ ihe ochie, na otu ebumnuche ochie nke "Emela ka ọ nwere onwe gị, mana indoctrinate", nke a na-atụgharịkarị ka ọ bụ nlọghachi mgbe niile.
Uzo akwukwo ohuru nke dabere na ihe omuma n'efu, nke emeghe na inweta agha aghaghi imeri ihe omuma di ugbua nke na adighi acho ekewapu onwe ya na usoro ezighi ezi ịmaatụ: "A ga m ezitere gị nchịkọta nke klaasị anyị agaghị ahụ n'akwụkwọ ozi ahụ, nyochaa ya ma zaa ajụjụ ndị ahụ, wee weta ọrụ" zuru ezu "na isiokwu m chịkọtara na mbụ".
A ọhụrụ mmụta nlereanya dabeere na free, emeghe na inweta ihe ọmụma dabeere na ihe e kere eke nke a anya ma ọ bụ mebere mahadum ga-ike ndị dị mkpa ọnọdụ maka òkè na nsonye. Ọnọdụ dịka ụmụ akwụkwọ nwedịrị ike ịmepụta ọdịnaya dijitalụ n'efu, emeghe na ịnweta (ederede / onyonyo / vidiyo) nke isiokwu onye ọ bụla ga-ahụ.
Ihe e mepụtara dijitalụ na-agbaso usoro ma ọ bụ ụkpụrụ nduzi nke usoro ọmụmụ Mahadum, dabere na nke onwe ha, nke bara uru, ọrụ, ahụmịhe ọkachamara yana mkpa maka mkpokọta.
Mahadum 3.0 nke usoro ihe omumu ohuru nke dabere na ihe omuma, n'efu na inweta ebe ndị ahụ metụtara (ụmụ akwụkwọ / ụmụ akwụkwọ) mepụtara / melite / gbanwee ọdịnaya agụmakwụkwọ, ha na-enweta nzere agụmakwụkwọ na ụgwọ ọrụ ọkachamara (asambodo / diplọma) na akụ na ụba (na mba ego, ego a na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ nke Cryptocurrencies).
Mahadum 3.0 nke usoro ihe omumu ohuru nke dabere na ihe omuma, n'efu na inweta na-akwado ya nyiwe nke obodo na / ma ọ bụ n'efu, oghere na-enweta ma nweta ya, ebe ndị nwere ike izute na ụdị ime ụlọ mmekọrịta.
Nnọọ n'ụdị nke ihe dị ugbu a na ojiji nke ụmụ amaala na-emejuputa n'onwe ha na mkpokọta na ngwaọrụ dijitalụ dị ka: Channels, Groups and Supergroups of Telegram and Telegraph, Steemit na Dtube.
Mahadum 3.0 nke usoro ihe omumu ohuru nke dabere na ihe omuma, n'efu na inweta nwere ike inye ụdị ntanetị weebụ ya (Blog, Digital Library or Online Knowledge Database) ebe a na-ebugote ọdịnaya agụmakwụkwọ maka oriri nke mmadụ niile, na-akwado ma na-enye ohere ka ọnụọgụ nke ọdịnaya onwe onye na-adọta ọtụtụ ụmụ akwụkwọ nwere mmasị ka ha nweta ihe ndị obodo nyere aka.
Mahadum 3.0 nke usoro ihe omumu ohuru nke dabere na ihe omuma, n'efu na inweta emeghachi ihe ndị otu Free Software Movement mere ugbua n'efu, nke n'aka nke ọzọ ma ọ bụ jikọtara ya na mmegharị dịka Ngwaọrụ Ntaneti, Cryptocurrencies, na ndị na-ede blọgụ (Ndị edemede / ndị edemede) nke ọdịnaya na Mmụta, Sayensị na Teknụzụ n'ozuzu, mana iche iche, nke ọ bụla n'ime oghere dijitalụ nke ya na onntanetị.
Mahadum 3.0 nke usoro ihe omumu ohuru nke dabere na ihe omuma, n'efu na inweta ebe nwa akwukwo obula bukwa onye nkuzi, onye n’aka nke ya ga-egosi ma o bu gosiputa ndi ozo n’oru ihe omuma nke mmadu nile n’enye, na-akwanyere ụda na ikike nke nwa akwụkwọ ọ bụla.
Mahadum 3.0 nke usoro ihe omumu ohuru nke dabere na ihe omuma, n'efu na inweta ebe ikekwe enwere naanị otu ọrụ ma ọ bụ akara mmụta mahadum nwere ọtụtụ modulu nke ihe ọmụma agbakwunyere Ndị Mmụta kwesịrị ikpuchi ya.
Mahadum 3.0 nke usoro ihe omumu ohuru nke dabere na ihe omuma, n'efu na inweta ebe nwa akwukwo obula, ma obu Bachelor, Middle Technician, Senior Technician, Graduate Engineer, nweta otu ọdịnaya ma ị nwere ike nweta asambodo ahaziri maka agụmakwụkwọ gị larịị na otu ọdịnaya anya.
Ezigbo ihe atụ iji ghọta echiche ahụ ga-abụ kpọọ naanị ọrụ «Integral Technologist» Nke ahụ nwere isiokwu dịka ọdịnaya niile nke ọdịnaya etinyere, dịka Cyber-security, sọftụwia efu, Nkwado teknụzụ, Robotics, Telecommunications, Programming na ndị ọzọ.
Na dị ka onye so na ya nwere afọ ojuju na-ekpuchi ọdịnaya na ule nke Mahadum mepụtara, ya na ndi okike nke otu ọdịnaya, na-enweta asambodo ha rue mgbe ha ga-ekpuchi opekata mpe na nata nzere ntozu ikpeazụ dịka "Teknụzụ Teknụzụ."
Na njedebe, a Bachelor ma ọ bụ Middle Technician nwere ike ịme / ịgafe, dịka ọmụmaatụ, 5 nke usoro 10 kachasị dị mkpa / isiokwu dị mkpa, otu ma ọ bụ dị iche na nke ndị Technician, Graduate ma ọ bụ Injinia were / wee nata, ma nata Asambodo ha kwuru Ndị dị ka Bachelor of Integral Technologist na ọpụrụiche / modulu X, Y ma ọ bụ Z.
Ọ bụ ezie na ndị ọzọ nwere ike ịnata otu akwụkwọ asambodo ọkachamara maka TSU na Postgraduate, Master ma ọ bụ Specialization Degree maka Bachelor / Engineer.
Na nkenke, echiche a bụ na Steeti / Mba / Gọọmenti na-agbaziri akụrụngwa nke teknụzụ, njikwa, agụmakwụkwọ na nke iwu nye ọtụtụ ụmụ amaala ndị mepụtagoro ọdịnaya dijitalụ n'efu na ndị chọrọ ma mụta ihe site na nke mbụ, nke mere na ha niile nwere nkwado gbara ọkpụrụkpụ gbasara ọkwa, ikike na ụda nke onye ọ bụla metụtara.
Ekwe ka n'aka monetization nke muta usoro na ihu ọma nke Mmụta / Mmụta, mgbe Mahadum na-ewepụta ego echekwara na Prọfesọ, yana Nwepụta na Mmelite nke ọdịnaya Digital Educational.
Ntughari a bu nani obere ihe omuma nke ihe puru ime Mahadum 3.0 n'okpuru usoro mmụta mmụta ọhụụ dabere na nnwere onwe, ihe emeghe na ịnweta, ya bụ, nkà ihe ọmụma nke Free Software Movement.
Ebe obu na enwere otutu akwukwo na ihe omuma nke di na ihe omuma a ka emere site na ihe a maara dika E-learning, B-learning ma obu M-muta na akwukwo onwe onye, ​​nke na-akwalite usoro mmuta nke emeghari na ọkwa nke mmepe nke ndị sonyere.
N'ime usoro ihe omuma ohuru a, enwere ike itinye echiche ndi ozo bara uru, dika Mahadum 3.0 na-enye onye obula so na ya ozi email puru iche iji zere ojiji nke uzo ahia ma obu na obughi echiche nke udiri akwukwo a.
Ma tinye, dị ka mmeju, ọmụmụ nke isiokwu ma ọ bụ ntụgharị ma ọ bụ usoro ọmụmụ nke agwa mmadụ dịka: Azụmaahịa Azụmaahịa, Nkà Ihe Ọmụma, Omume na Ọha na Ọha na Ọha, Asụsụ Mba Ọzọ, Ebumnuche, n'etiti ndị ọzọ, maka ọzụzụ zuru oke zuru oke.
M anya na ị na-amasị a amaghị na Free Software Movement nke mere na ọnụ anyị nwere ike «mbanye anataghị ikike Education».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » Mmụta Hacking: Usoro ngwanrọ efu na usoro agụmakwụkwọ
onye nchekwa data dijo
Akwa isiokwu! M hụrụ n'anya!
Zaghachi na datacrusader
Daalụ maka okwu gị!
Anọ m na-arụ ọrụ a na Costa Rica maka afọ 10.
Nchịkọta ya na: https://pillku.org/article/urge-ensenar-cibernautica/
Zaghachi Fernando Chaves Dìaz
Ọmarịcha! Do nwere ụfọdụ njikọ ịgụ iji hụ otu?
znew: iwu ka recompress .za .gz faịlụ
Linux 5.x: ngalaba kernel ga-eme ka ọnụọgụ gbagoo na mbido 2019